TACABUR: ”Waxaa la igu samiyay Malaladii dagaalkii Maiwand” | Hadalsame Media
Home Taariikh TACABUR: ”Waxaa la igu samiyay Malaladii dagaalkii Maiwand”
TACABUR: ”Waxaa la igu samiyay Malaladii dagaalkii Maiwand”
(Hadalsame) 16 Sebt 2019 – Waxaa laygu samiyay Malaladii dagaalkii Maiwand, geesiyaddii ugu weynayd dhulka Afghanistaan. Pashtuu ahaan waxaan ku faannaa qabiillo badan oo ku kala firirsan Hindiya iyo Afghanistaan. Afar qarni ayuu magaceennu jiraa, waxaana leenahay afgarasho la dhaho Pashtunwali taas oo waajib nooga dhigaysa in aan u dabacsanaano martideenna oo dhan, waxaa ka sii qiimo badan sharafka. Waxa ugu xun ee ku dhici kara qof Pashtuu ah waa inuu waayaa sharafka wejigiisa. Ceebtu wax ay xaggeena ka tahay wax laga argagaxo. Waxaan leenahay oraah tiraahda ” sumcad la’aan, dunidu waxba ma ahan”
Waan isdagaalnaa, waxaan iskula doodnaa sidii in macnaha ilma-adeernimadu ay tahay cadawtinimo, balse waan u midownaa kuwa dibadda nooga yimid ee doonaya in ay dhulkeenna boobaan.
Ilmaha Pashtuuga oo dhami waxay ku soo koreen qisada ku saabsan sidii ay Malalai u dhiirrigelisay ciidamadii Afghanistaan ee la dirirayay dagaalyahannadii ingiriiska sannadkii 1880kii.
Malalai waxay ahayd gabar uu dhalay nin ari-raace ah oo ku noolaa tuulada Maiwand oo galbeedka ka xigta Kandahar. Markii ay toban iyo dhowr sano jirtay aabaheed iyo ninkii iyada guursan lahaaba waxay ka mid noqdeen kumanaanka reer Afghan ee dagaalka kala hortagayay ingiriiska.
Malalai iyo dumarkii magaalada waxay soo aadeen furintii dagaalka si ay biyo ugu keenaan dagaalyahannadii. Waxay ahayd maalin gumuca layskala daalay oo uu dhiiggu mulucleeyay. Malalai waxay aragtay in raggii reer Afghan ay dagaalka ka dhuumanayaan oo ay furimaha banaynayaan.
Markii uu dhulka ku dhacay ninkii calanka Afghan waday ayay dhexda ku xiratay xijaabkeedii caddaa una soo banbaxday fagaarihii, iyada oo ciidamadii ingiriiska hor taagan ayayna ku qaylisay hadalladii taariikhda galay ” haddii aadan maanta ku dhimanin fagaaraha Maiwand, ilaah baan ku dhaartaye qof ayaa ku badbaadin doona adiga oo astaan u ah ceebta”
Malalai waxay ku dhimatay rasaastii lagu furay, balse erayadeedii waxay saameeyeen ciidamadii Afghan oo inta dagaalkii ku laabtay ingiriiskii gaarsiiyay mid ka mid ah jabkii ugu weynaa. Dadka reer Afghan waxay ku faanaan in boqorkii ugu dambeeyay uu dagaalkii Maiwand taallo uga dhisay bartamaha Kabul.
Iskuullo badan oo kuwa gabdhaha ah ayaa loogu magac daray Malalai, balse awoowahay oo ah wadaad diimeed ma uusan jeclaysan in magaca Malala la ii bixiyo isaga oo yiri ” waa magac ku astaysan murugo”.
Waxaan ka soo turjumay buugga I am Malala ee ay qortay Christina Lamb.
Waxaa Qoray: Akhwaan xasan Jidhi
Previous articleCumaroow! Gabdhaha qurxoon, dadka iyagaa ugu farxad yar!! (Sheeko akhrin mudan)
Next articleDHIB LAMA DOONTO! Sucuudigu DAB ayay ku falaadeene hadda maxaa u FURAN?!